Dokumenti sir ah oo laga xaday ciidamada Israel lagana cabsi qabo in loo... - Caasimada Online
Home Dunida Dokumenti sir ah oo laga xaday ciidamada Israel lagana cabsi qabo in...
Dokumenti sir ah oo laga xaday ciidamada Israel lagana cabsi qabo in loo…
Tel Aviv (Caasimada Online) – Warbixin Sir ah oo ay lahaayeen Ciiddanka Maraakiibta Quusta Badda ee Yuhuudda ayaa la sheegay inuu ka lumay Flash USB drive ah oo ay ku jireen Macluumaaad Xasaaasi ah.
Haweeney Qandaraasle ah ayaa sheegtay inuu ka lumay USB driver-ka oo ay ku jireen Dukumentiyo xasaasi u ah oo u gaar ahaa Nidaamka Difaaca horumarsan ee Shirkadda Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Milliteriga iyo Boliska dharka cad ee Yuhuudda ayaana bilaabay baaritaan ku aadan suurto-galnimadda inuu lumay ama la xaday USB drive-kaasi.
Warbixin ka soo baxday Ciiddanka Maraakiibta Badda Quusta (Submarine)-ka ayaa lagu sheegay in Haweeney Qandaraasle ka ah Saldhigga ka shaqeysa Rafael Advanced Defense Systems Ltd ee magaalladda Xayfa ayaa sheegtay inuu qalabkaasi kaga lumay gurigeeda.
Waxay kaloo sheegtay inuu qalabkaasi ka lumay 2 isbuuc ka hor, mar ay Xafiiska ka qaaday oo ay la aaday gurigeeda.
Wax faahfaahin ah lagama bixinin nooca Xogta eek u kaysanaa USB Drive-kaasi, inkastoo la sheegay inay ku jireen Xog dhinaca Ammaanka oo aad khatar u ah.
Haweenydaasi ayaa la shegay inay muteysan doonto Tallaabo dhinaca Anshaxa Shaqada ama lagu soo oogi doono Dembiga ahaa inay lumisay Warbixintaasi.
Shirkadda Qandaraaslayaasha Rafael Advanced Defense Systems Ltd ee (RAFAEL) waxay mas’uul ka yihiin Xogaha lagu farsameeyey Nidaamka Difaaca Gantaalladda ee Ciiddanka Difaaca Hawada iyo kuwa Gujiska ee Yuhuudda.